mairie-antananarivo – Nanolotra fitaovana ho an’ny boriboritany faha efatra ny vondrona Filatex
Nanolotra fitaovana ho an’ny boriboritany faha efatra ny vondrona Filatex
auteur 6 novambra 2017 Commentaires fermés
Tonga namaly nyantson’ny Boriboritany fahaefatra ny vondrona « FILATEX » androany maraina ka tonga izy ireo nanolotra fitaovana fanadiovana toy ny : pelle miisa 30, rateau miisa 40, gans miisa 20, barre à mine miisa 4, fourche miisa 40. Ireo fitaovana ireo dia hampiasaina avy hatrany amin’ny asa fanadiovana izay fanao isan’andro sy amin’ny fanatanterahana ny tetik’asa « DIO MAHARITRA », izay karakarain’ny boriboritany faha efatra.
Araka ny voalazan’ny Delegen’ny boriboritany fahaefatra, Atoa RAMAHANDRIMANANA Solofoniaina Daniel dia hanomboka rahampitso ny tetik’asa « Dio maharitra » izay hatao eny amin’ny manodidinan’ny RN7, manomboka eo amin’ny Senat ka hatreny amin’ny tetezan’ny Tanjombato sy ny boulevard de l’Europe. Nisaotra sy nankasitraka ny fiaraha-miasa tamin’ny Filatex ny boriboritany faha efatra, ka maniry hatrany ny fitohizan’ny fiaraha-miasa.
Araka ny voalazan’ny tompon’andraikitra ao amin’ny vondrona Filatex, dia mifandraika indrindra amin’ny fotokevitr’izy ireo izao fanadiovana ny Tanàna izao. Izany indrindra no nahatonga azy ireo tsy nisalasala nitondra fanampiana ara-pitaovana. Manantena izy ireo amin’ny faharetan’ny fahadiovan’ny tanàna ary maniry ny fitohizan’ny fiaraha-miasa amin’ny boriboritany faha efatra.
AO ANATY » Fahadiovana
Fanesorana affiche na peta-drindrina- Boriboritany fahatelo (CUA)
Fanadiovana Boriboritany faha-3 (CUA) sy UDITEC
Famaranana FUTSAL- CUA
Boriborintany faha 6 (CUA): Nanao fanadiovana faobe entina miady amin’ny aretina pesta